YEYINTNGE(CANADA): Sunday, February 10
တရုတ် နိုင်ငံမှ တောင်းပန် စကားပြောကြားရန် ဂျပန် ဝန်ကြီးချုပ် တောင်းဆို
ဂျပန် စစ်သင်္ဘော ရေဒါအား နှောင့်ယှက် ပိတ်ဆို့ မှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ တရုတ် နိုင်ငံမှ တောင်းပန် စကားပြောကြားရန် ဂျပန် ဝန်ကြီးချုပ် တောင်းဆို
နိုင်ငံတကာ ရေပိုင်နက် အတွင်းရှိ ဂျပန်ဖျက် သင်္ဘော တစ်စင်း၏ ရေဒါ လုပ်ဆောင်မှုကို တရုတ် ဖရီးဂိတ် စစ်သင်္ဘော တစ်စင်းက နှောင့်ယှက် ပိတ်ဆို့မှု နှင့်ပတ်သက်၍ ဝန်ခံရန်နှင့် တောင်းပန် စကားပြော ကြားရန် ဂျပန် ဝန်ကြီးချုပ် ရှင်ဇိုအာဘေးက တရုတ် အစိုးရကို ဖေဖော်ဝါရီ ၈ ရက်တွင် တောင်းဆို ခဲ့ကြောင်း ဂျီဂျီ သတင်းဌာန၏ ထုတ်ပြန်ချက် များအရ သိရသည်။
အရှေ့တရုတ် ပင်လယ် အတွင်းရှိ အငြင်းပွားဖွယ် ဖြစ်သော ကျွန်းများ အရေးနှင့် ပတ်သက်၍ တရုတ်နှင့် ဂျပန် နှစ်နိုင်ငံ အကြား အငြင်းပွားမှုသည် တင်းမာ လျက်ရှိနေချိန်တွင် ဂျပန် နိုင်ငံ၏ စွတ်စွဲချက် များကို တရုတ် နိုင်ငံက ငြင်းပယ် ခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းတွင်မှ အဘီ၏ တောင်းဆိုချက် ထွက်ပေါ်လာခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
တရုတ် နိုင်ငံသည် ၎င်းတို့၏ လုပ်ဆောင်မှု နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဝန်ချ တောင်းပန်စေ လိုကြောင်း၊ သို့မှသာ ထိုသို့ သော လုပ်ရပ်မျိုးကို ထပ်တလဲလဲ လုပ်ဆောင်ခြင်းမှ ဟန့်တား နိုင်ရန် မိမိတို့ ကြိုးပမ်း လုပ်ဆောင် သွားမည်ဟု ဝန်ကြီးချုပ် အာဘေး၏ ပြောကြားချက်ကို BS Fuji ရုပ်သံလွှင့် ဌာနနှင့် Jiji သတင်းဌာနတို့ သတင်း ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
တရုတ် ဖရီဂိတ် စစ်သင်္ဘော၏ ရေဒါ ပိတ်ဆို့မှုနှင့် ပတ်သက်သည့် အသေးစိတ် အချက်အလက်များ မှတ် တမ်းတင် ဓာတ်ပုံများနှင့် မျက်မြင် သက်သေများကို အခိုင်အမာ ရရှိထားကြောင်း ဝန်ကြီးချုပ် အာဘေးက သက်သေ အထောက် အထားများဖြင့် ကိုးကား ပြောကြားခဲ့သည်။
ဂျပန် နိုင်ငံ၏ စွတ်စွဲချက်ကို တရုတ် နိုင်ငံက ငြင်းဆိုပြီး နောက်ပိုင်းတွင် တရုတ် သံအမတ် တစ်ဦးကို ဂျပန်နိုင်ငံ က ဖေဖော်ဝါရီ ၈ ရက်တွင် ဆင့်ခေါ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါ ဆင့်ခေါ်မှုသည် ယခုနှစ် အတွက် တတိယ မြောက် အကြိမ် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
တရုတ် နိုင်ငံဘက်မှ ယင်းကဲ့သို့ တုံ့ပြန်မှုသည် လုံးဝ လက်ခံနိုင်သည့် အနေအထား မရှိကြောင်း တရုတ်သံ အမတ် ချန်ယောင်ဟွာကို ဂျပန် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ ဒုတိယ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး ချီကာဂို ခါဝိုင်အီက ပြောကြားခဲ့သည်။
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 2/10/20130အကြံပြုခြင်း
ခုတ်ချင်သလိုခုတ်ပြီး ပြည်ပကိုအမြန်ပို့နေတဲ့ အသက်မပြည့်သေးသော မြန်မာ့သစ်ပျိုပင်တွေကို တင်ထားတဲ့ စီဘီတွဲတွေ ဧရာဝတီမြစ်ထဲမှာ မမြင်ချင်မှအဆုံးဖြစ်နေရတာ..................ဥပဒေမဲ့မှုကြောင့်လား။
ဦးတိတ်နိုင်သို့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးစိုးသိန်းမှ ပေးစာ။
2011 နှစ်ကုန်ပိုင်း ဗုဒ္ဓဂါယာမှာ ရိုက်ထားတဲ့ ညာဘက်ပုံ
သူတပါးအိမ်ဖျက်၊ ရေဖြတ်၊ မြေနီကုန်းက ဘိန်းမင်းသား
ဗားဂရာ လမ်း အမှတ် ၂၆၀ စမ်းချောင်း ၊ တရုပ် နံမည် ချန် ချူးဖေါင် ဘိန်း ရောင်းသူ ပြီးတော. မြေနီကုန်း မှာ ဘရစ် ခ်ျ စတုန်း ကားဘီးတွေ ပါရောင်းသူ၊ မူလက ရှမ်းပြည် တောင်ကြီး လူဝင်မှု က ထုတ်ပေးတဲ. ဧည်.နိုင်ငံသား ကဒ် ကိုင်ထားသူ ဦးတင်.နိုင် (ခေါါ်) ချန် ချူးဖေါင်ဟာ-ရွှေတောင်ကြား ၂ ရပ် ကွက် ထဲ က မြေ တကွက်ကို အဓမ္မ နည်းတွေသုံးပြီး မောင်ပိုင်စီးဖို.ကြိုးစားနေပါတယ်။
သူ ယုတ်မာခဲ. တဲ.သူက လေဖြတ်ထားပြီး အိပ်ရာပေါ်ကမထနိုင် သူ. ဆိုင်းတောင် သူ မထိုးနိုင်တော.တဲ. အသက် ၇၉ နှစ် အရွယ် အဘတဦးပါ။ ထို အဘမိသားစုပိုင် အိမ်ကို သားသမီးအရင်းတွေ အနားမှာ မရှိတဲ. အချိန် အချောင်လိုချင်တဲ. ဒီ လူယုတ်မာ တင်.နိုင်ကို တရား နည်းလမ်းကျစွာ ပြန်တုန်.ပြန်ချင်ပါတယ်။ လိုအပ်လျှင် an eye for an eye ပါပဲ။ ဘောင်ထဲက အရေးယူနိုင်ဖို. စိတ်ဝင်စားသောသူများ ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။
လူ. အခွင်.အရေး ချိုးဖေါက်ပြီး သက်ကြီး ရွယ်အို တဦးကို တိရိစ္ဆာန် တစ်ကောင်လို ဆက်ဆံ အနိုင်ကျင်.ပြီး သူများအိမ်ကို အချောင်လိုချင် တဲ. တင်.နိုင် ခေါ် ချင် ချူး ဖေါင် က ဘိန်းရောင်း ပြီး စီးပွားတောင်.တော.၊ သူ လုပ်တိုင်း ရမယ် လို. အထင် ရှိနေပုံ ရပါတယ်။
သူများဘိုးဘွားပိုင်မြေ တကွက် အချောင် ရဖို. --အိမ်ဝင် ဖျက်၊ ရေလိုင်းတွေ ပါ ပိတ် ဖျက်ဆီးခဲ.တယ်။ တယောက်ထဲ နေရရှာတဲ. အဖိုးကြီးအို တစ်ဦး သန်.ရှင်း ရေး လုပ်လို. မရအောင် ကို ရေအိမ်ထဲမှာ ပါ အုတ်ခဲတွေ ခဲ တွေ သဲ တွေ ထဲ.ပြီး ပိတ်ခဲ.တယ်။ သူ ငယ်ပြန်ချင် သလိုလို ဖြစ်နေတဲ.၊ အဖိုးအို တဦးကို သူ. ကို သား အဖြစ်မွေးစားခိုင်းတယ်။ တရုတ်ကြီး ဘိန်း နဲ. မူး ရစ်ဆေးဝါးပါ ရောင်းဝယ်သူ တရုတ်ကြီးက အညာသား ပခုက္ကူ ဇာတိ ကျောင်းဆရာ အဘ ကြီး ရဲ. အမွေစား အမွေခံ သား အဖြစ်ရောက်သွားတယ်။
၂၀၁၂ ဂျွန် အိမ်ဖျက်ချိန် နဲ. ၂၀၁၂ နိုဝင်ဘာ အထိ အဘကြီးဟာ ကူမဲ. သူ မရှိပဲ နောက် က ရေချိုးခန်းလေးမှာ ရေ မရှိ မီး မရှိ ဘယ်မှာ လဲ မသွားနိုင်ပဲ နံနံ စော် စော် နေရ တယ်။ တင်.နိုင် လုပ်ပုံ က လူ သတ်လို. မရတော.လေဖြတ်ထားပြီး မသွားမလာ ဘယ်သူ. ကို မှ မတိုင်ကြားနိုင်တော.တဲ.၊ အဖိုးကြီးတစ်ယောက်ကို မသေ သေ အောင် ညှင်းဆဲပြီး သေတဲ. အချိန်မှာမှ သူက မွေးစားသား ဆိုပြီး သားသမီး အရင်းတွေ နိုင်ငံခြား ရောက်နေတုန်း ၀င် မောင်ပိုင် စီး မယ် ၊ ဒီ လို စီ စဉ်ထားတာပါ။
၂၀၁၂ နိုဝင်ဘာ အထိ အဘကြီး က အသက်ပြင်း မသေသေးတော. နောက်ဆုံး မြေနီကုန်းက တင်.နိုင်လူတွေက တညနေ အဘကြီးကို ချော.ခေါ် သွားပြီး လူကြီးကို လမ်းဘေးမှာထားခဲ.တယ်။ အရက်နဲ. စ်ိတ်ကျဆေး တိုက်၊ ပေါင်းတိုက်ရင် ဘာဖြစ်မလဲ လူတိုင်းသိတယ်။ ဒီလို ထပ် လုပ်ကြံအပြီး အဘကြီး ဒုတိယ အကြိမ် လေဖျန်း ဘုန်းဘုန်းလဲကျ၊ တံ ခါးဘေးမှာ တစ်ယောက်ထဲ လဲ ကျကျန်နေခဲ.တယ်။ လုပ်တုန်းကတော. လူအိုကြီး ပြန်ထလာနိုင်ရင် စကား ပြန်မေးလို. မရတော. လောက်အောင် လေဖြတ်ဆုံးပါးသွားအောင်လုပ်တာပါ။ အဘကြီး က လေတခါ ဖြတ်ပြီးသားမို.၊ ဒုတိယ အကြိမ်ကို သူတို. တမင် တွန်းပို. ကြံစည်ခဲ.ပါတယ်။ အသက် ၇၉ နှစ် အရွယ် လူ အို တစ်ယောက်ကို အသေ လုပ်တာပါ။
လမ်းမလျှောက် လှေခါးဘေးမှာ လဲနေတဲ.အဘကို လူ ၂ ဦး က ပြန်ခေါ်လာပြီး ပြုစု သူ မရှိတဲ. အိပ်ခန်းလေးထဲ ထဲ. ခဲ.တယ် ။၂၀၁၂ နိုဝင်ဘာ ၁၂ ရက်။ ၃ ရက် ကြာ အစာ မရှိ ရေမရှိ နံစော်နေတဲ. အခန်းလေးထဲမှာ ပိတ်မိနေတော.၊ အဘကြီးစီ ရေသန်. လာ ရောင်းတဲ. သူတယောက်က နောက်ဆုံး အိပ်ရာထဲ လဲ နေတာ တွေ. ပြီး ဆေး ရုံပို. ခဲ.တယ်။ အဘကြီး အသက် ရှုနေပါသေးတယ်။ သူ. လက်တွေ ခြေတွေ ကတော. မလှုပ်နိုင်ပါ။ ဒီအခြေအနေမှာ တင်.နိုင်က သူ. လူတွေ လွှတ်ပြီး အဘ ဘယ်ဆေးရု့တက်လဲ လိုက်စုံစမ်း လို. အဘကြီး လုံခြုံရေး အရ ဖွက်ထားရပါတယ်။
ရွှေတောင်းကြား ၂ ရပ်ကွက် ရပ် ကွက် အုပ်ချုပ်ရေး ကပါ ဒီ အကြောင်းတွေ သိတယ်။
မြန်မာပြည် ဘယ်လိုဖြစ်နေသလဲ၊ အဘကြီး သားသမီးတွေ သိတဲ. အချိန်မှာ အိမ်က အုတ်ပုံ ပဲ ကျန်တော.တယ်။ ၂၀၁၂ စက်တင်ဘာမှာ ဗဟန်းစည်ပင် နှင်. မြို. တော် ရေဌာန မှာ ရေပြန်သွယ်လို.ရအောင် စည်ပင်စီ တရားဝင် လျှောက်လွှာတွေနဲ. ရေပြန်လျောက်တော.×××အမည်ရ ဗဟန်းစည်ပင် သူက ရေ လျောက်ခွင်. တွေ တနိုင်ငံလုံး ပိတ်ထားတယ်လို.ပြောတယ်။
အိမ်က အမှတ် ၁၇ အီး အင်းယားမြိုင်လမ်း သွားကြည်.နိုင်ပါတယ်။ မြင်.ကို ဆိုသူ က တင်.နိုင် ၏ ဒလံဖြစ်ပြီး သူဌေးတင်.နိုင်ခိုင်းတာ တာ ၀န်ယူ လုပ်ကိုင်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်ဖျက်သွားတာကတော. တင်.နိုင် ညီ အမ ၂ ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံး ရှမ်းပြည်က ပါ။ သဘောပေါက်ပေါ.။ အိမ်ဝင်ဖျက်တဲ. မိန်းမ နှစ်ယောက် က ကြည်.မြင်တိုင်မှာနေပါတယ်။
ဒီ လို အချိုး ဒီ ပုံတွေ မြန်မာပြည်မှာ ကူပေးမဲ.သူ နည်းနည်ှး မ ရှိပဲ ဆက်ဖြစ်နေရင်၊ မခံနိုင်တဲ.သူတွေက ခေတ်သစ် မွန်တီ ခရစ်စ်တို တွေ ဖြစ်လာကြလိမ်.မယ်။ ရက်ရက်စက်စက် ပြုထားသူတွေကို ရက်ရက်စက်စက် ပြန်တုန်.ပြန်ကြလိမ်.မယ်။ ရပ်တည်ချက်နဲ. လူလုပ်နေတဲ.သူတွေ မျိုး မတုန်းသေးဘူး။
တင်.နိုင် လူယုတ်မာက အမေရိက ကို အကြံအဖန်နဲ. လာခွင်. ရ ထားတယ်။ အမေရိက မှာ သန်းရွှေ လက်ထက် စီးပွား ဖြစ်ခဲ. တဲ. သူတွေ အများကြီး။ တင်.နိုင်မှာမယား ၄ယောက် ရှိပြီး ခု သူတို.မောင်ပိုင်စီးမဲ. အိမ်ကို မယားနံပါတ်၂ နဲ. သူ. ရီးဇား ဖြစ်သူက က တင်.နိုင် လက်ဝေခံ လုပ်ပြီး မတရား ၀င်လုဖို.ကြံနေကြတယ်။
ဗဟန်း ရဲ စခန်း နဲ. ဗ ဟန်း စည်ပင်သာယာ ကို တင်.နိုင် ခွန်.ထားတယ်။ဒါစနစ်၏ ပြဿနာ တစ်ခုပဲ မဟုတ်ပါလား။ ရှမ်းပြည် က ရှမ်းတရုပ်တစ်ယောက် က သူ များ အိမ်တွေ ၀င်ဖျက်၊ မွေးစားသားဖြစ်၊ အိမ်သာ က အစ ဖျက်။ လူ ကြီး ကို သေနတ်ပြ၊ အရပ်စာချုပ်တွေသုံးပြီး၊ ပိုင်နက်ကျူးလွန် သူတပါးအိမ်ကို အုတ်ပုံဖြစ်အောင်ဖျက်ဆီးပြီးကာမှ အိမ်ပိုင် ရှင် လုပ်ဦး မလို.တဲ.။ ဘောင်ထဲက အရေးယူနိုင်ဖို. စိတ်ဝင်စားသောသူများ ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။
ဖေဖေါ်ဝါရီ ၁၀ ၂၀၁၃
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 2/10/2013 1 အကြံပြုခြင်း
post by ပြန်ကြားရေး ၀န်ကြီးဌာန
၁၃၇၄ ခုနှစ်၊ ပြာသိုလပြည့်ကျော် ၁၄ ရက် (၂၀၁၃ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၉ ရက်)
၁။ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်၏ ပဉ္စမအကြိမ်မြောက် စုံညီ အစည်းအဝေးကို ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ (၈) ရက်နေ့ ၁၃:၃၀ ချိန်တွင် လွှတ်တော်ဝင်း (အိုင် ၁၂) အဆောင်တွင်ကျင်းပခဲ့ပါသည်။
အစည်းအဝေးတွင် အပြီးသတ်အစီရင်ခံစာ ပြုစုရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့ ဆွေးနွေးရာတွင် ကော်မရှင် ဥက္ကက အပြီးသတ် အစီရင်ခံစာ ရေးဆွဲရာတွင် ကျင့်သုံးရမည့် အခြေခံမူ များနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ရာ ထိုအခြေခံမူများပေါ်တွင် အစည်းအဝေး တက်ရောက် လာကြသော ကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင်များက ဝိုင်းဝန်းဆွေးနွေးကြပါသည်။
၂။ အစည်းအဝေးသို့ ကော်မရှင်ဥက္ကဌမှ ကွင်းဆင်းရန်တာဝန်ပေးချက်အရ ကွင်းဆင်းခဲ့ကြသော ကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင်တို့က ဇန်နဝါရီလ (၂၄) ရက်နေ့နှင့် (၂၅) ရက်နေ့တွင် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ စစ်ကိုင်းခရိုင်၊ စစ်ကိုင်းမြို့နယ်ရှိ သီတဂူအာယုဒါန ဆေးရုံတွင် ဆေးကုသမှုခံယူနေကြသော သံဃာ (၆) ပါး၏ ကျန်းမာရေးအခြေအနေနှင့် မုံရွာခရိုင်၊ ဆားလင်းကြီးမြို့နယ်၊ ကံကုန်းကျေးရွာမှ နာမကျန်းဖြစ်သဖြင့် ရန်ကုန်ကလေးဆေးရုံကြီးတွင် ဆေးဝါးကုသမှု ခံယူခဲ့ပြီး ကျေးရွာသို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့သော ကလေးသူငယ် (၄) ဦး တို့၏ ကျန်းမာရေး အခြေအနေတို့နှင့် ပတ်သက်ပြီး လေ့လာတွေ့ရှိချက်များ ကို ကော်မရှင်သို့ တင်ပြခဲ့ပါသည်။
၃။ ထို့ပြင် ကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင်တို့သည် ဖေဖော်ဝါရီလ (၆) ရက်နေ့မှ (၇) ရက်နေ့အထိ ထပ်မံ ကွင်းဆင်း
လေ့လာပြီး သီတဂူအာယုဒါန ဆေးရုံတွင် ဆေးဝါးကုသနေကြသော သံဃာတော်များ၏ ကျန်းမရေး အခြေအနေကိုလည်းကောင်း မုံရွာခရိုင်၊ မံရွာဆေးရုံတွင် အုတ်ကန်ပြိုကျပြီး ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိ သဖြင့် ဆေးကုသခံနေသူ အမျိုးသမီးကြီး၏ ကျန်းမာရေး အခြေအနေကိုလည်းကောင်း ကော်မရှင်သို့ တင်ပြခဲ့ပါသည်။
သီတဂူအာယုဒါနဆေးရုံတွင် ဆေးကုသခံယူလျက်ရှိသော သံဃာ (၆) ပါးအနက် (၃) ပါး သည် ဖေဖော်ဝါရီလ (၈) ရက်နေ့တွင် ဆေးရုံဆင်းသွားပြီးဖြစ်ကြောင်း လည်း သိရှိရပါသည်။
၄။ ကော်မရှင်အား နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး၏ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၉၅/၂၀၁၂) ဖြင့် ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးခဲ့ ရာ တွင် ကော်မရှင်အနေဖြင့် နိုင်ငံတော်သမ္မတထံသို့ ကြားဖြတ် အစီရင်ခံစာကို ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီ လကုန်တွင် တင်သွင်းရန် သတ်မှတ်ပေးခဲ့ပါသည်။
ထိုတာဝန်ပေးချက်အရ ကော်မရှင်အနေဖြင့် ကြားဖြတ် အစီရင်ခံစာကို ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁၉) ရက်
နေ့ တွင် နိုင်ငံတော်သမ္မတထံသို့ တင်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။
နေ့စဥထုတ်သတင်းစာများတွင် ဖော်ပြခဲ့သော ကော်မရှင်၏ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁၉) ရက် နေ့တွင် ထုန်ပြန်ခဲ့သည့် သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အမှတ် (၂/၂၀၁၃) တွင်လည်း အဆိုပါ အစီရင်ခံစာသည် ကြားဖြတ် အစီရင်ခံစာသာ ဖြစ်ကြောင်း၊ ထုတ်ပြန်ကြေညာရန် မဟုတ်ကြောင်းဖြင့် ရှင်းလင်းဖော်ပြခဲ့ပါသည်။
ကော်မရှင်၏ အပြီးသတ် အစီရင်ခံစာ ထုတ်ပြန်သည့်အခါမှသာ အသေးစိတ် အချက်အလက်တို့ကို ထုတ်ပြန် ကြေညာမည်ဖြစ်ပါကြောင်း ထပ်လောင်းဖော်ပြအပ်ပါသည်။
၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၉ ရက်
သိန်းနှစ်ထောင် တန် ဦးသိန်းလွင်ဦး
ကိုယ့်ကိုယ်ကို သိန်းနှစ်ထောင်တန်မှန်း အခုမှသိရတယ်
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လှိုင်သာယာ မြို့နယ်၊ ဆင်ဖြူရှင်လမ်းနှင့် မုံရွာလမ်း ထောင့်ရှိ အင်ကြင်းဆည်းဆာခန်းမဆောင် ၌ (၂၀၁၃ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ (၁၀)ရက်နေ့တွင်) တောင်သူလယ်သမား အခွင့်အရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှု ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးသိန်းလွင်ဦးနှင့် ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်များက တောင်သူ
လယ်သမား အခွင့်အရေးနှင့် ပတ်သက် ၍ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
အဆိုပါ အခမ်းအနားတွင် တောင်သူလယ်သမား ကာကွယ်ရေး ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူက Hot News ဂျာနယ် အတွဲ-၃၊ အမှတ် (၁၁၃)ပါ ဘုရားဝတ္တကမြေ
ပါဝင်လို့ ဇေကမ္ဘာအား တရားစွဲဆို ခေါင်းစဉ်ပါသတင်းအား ၂၉.၁၁.၂၀၁၂ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး တရားလွှတ်တော်၌ တရားရုံး အား
မထေမဲ့မြင်ပြုမှုဆိုင်ရာ ဥပဒေဖြင့် တရားစွဲဆိုထားရာမှ ၁၀.၂.၂၀၁၃ ရက်နေ့တွင် ထပ်မံ၍ သာသနာ့ဒါယိကာ ကြီး ဒါယကာဦးခင်ရွှေကို ကျက်သရေ ယုတ်စေသော ရေးသားဖော်ပြပြောဆို ခဲ့သည့်အတွက် လျော်ကြေးအဖြစ် သိန်း (၂၀၀၀) နှင့် ရုံးတော်ခွန် ကျပ်ငွေ ဆယ်သိန်းလေးထောင်ရလိုကြောင်းနှင့် ပတ်သက်၍ တောင်သူလယ်သမား ကာကွယ်စောင့် ရှောက်မှုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးသိန်းလွင်မှ ““ကျွန်တော်ကို ဇေကမ္ဘာဦးခင်ရွှေမှ သူ့ကို အသရေယုတ်စေတဲ့
အတွက် ဒီနေ့ သိန်းနှစ်ထောင် တောင်းတယ်။ ကျွန်တော့်ကို ကျွန်တော် သိန်းနှစ်ထောင် တန်မှန်း အခုမှပဲ သိလိုက်ရတယ်။ ခေတ် အဆက်ဆက် ကျွန်တော်
ဖြတ်သန်း လာတယ်။ ၁၉၄၅ ခုနှစ်တုန်းက ဆိုရင် ကွန်မြူနစ်ခေတ်တစ်ခေတ်ပေ့ါ။ အဲဒီခေတ်တုန်းကဆိုရင် ကွန်မြူနစ်တွေ ဆိုးတယ် ဆိုးတယ်ဆိုပေမယ့်
ဘုရား ကျောင်းကန်မြေ သိမ်းယူတယ်လို့ မကြား ဖူးခဲ့ဘူး။ ခေတ်မီတိုးတက်တဲ့ ဒီဘက် ခေတ်မှာ ဒါတွေအခုရှိတယ်ဗျာ။ ကျွန်တော် တော်တော် အံ့သြသွားတယ်””
ဟု တရားရုံးမှနေ သိန်းနှစ်ထောင် တောင်းကြောင်းကို ဦးစွာအဖွင့်အမှာ စကားတွင် ထည့်သွင်းပြောခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
အသည်းရောဂါ B ပိုးအကြောင်းနှင့် ရောဂါ အမေးအဖြေ
( ကပ်ရောဂါဘေးမှ ကင်းဝေးပါစေ)
ကွယ်လွန်သူ တေးသံရှင် ဟယ်ရီလင်း ရဲ့ နောက်ဆုံးခရီး
ဖေဖော်ဝါရီလ (၇) ရက်နေ့ ရန်ကုန်၊ ရေဝေးသုသာန်
ထူးကုမ္ပဏီလက်အောက်ရှိ လုပ်ငန်းအားလုံး ယခုနှစ်အတွင်း အများပိုင်ပြောင်းမည်
Posted on Feb 06 13 - 06:23 AM
အေးသူစံ၊ အောင်ခိုင် (7Day News Jouranl)
ထူးကုမ္ပဏီအုပ်စုပိုင် အာရှစိမ်းလန်းဖွံ့ဖြိုးမှုဘဏ် (AGD Bank) ကို အများပိုင်ဘဏ်အဖြစ်ပြောင်းလဲမည်ဟု ကြေညာပြီးနောက် အခြားအမြတ်အစွန်းရရှိနေသည့် လုပ်ငန်းများကိုပါ အများပိုင်အဖြစ် ပြုလုပ်မည်ဟု ဦးရဲမင်းဦးက ပြောကြားခြင်းဖြစ်သည်။
ကုမ္ပဏီအောက်ရှိ အမြတ်အစွန်းရရှိနေသော လုပ်ငန်းများအားလုံးကို ၂၀၁၃ ခုနှစ်အတွင်း အများပိုင်လုပ်ငန်းအဖြစ် ပြောင်းလဲသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ထူးထရေးဒင်းကုမ္ပဏီမှ ဒါရိုက်တာတစ်ဦးဖြစ်သူ ဦးရဲမင်းဦးက ပြောသည်။
မကြာသေးမီ ရက်ပိုင်းအတွင်းက ထူးကုမ္ပဏီအုပ်စုပိုင် အာရှစိမ်းလန်းဖွံ့ဖြိုးမှုဘဏ် (AGD Bank) ကို အများပိုင်ဘဏ် အဖြစ် ပြောင်းလဲမည်ဟု ကြေညာပြီးနောက် အခြားအမြတ်အစွန်း ရရှိနေသည့် လုပ်ငန်းများကိုပါ အများပိုင်အဖြစ် ပြုလုပ်မည်ဟု ဦးရဲမင်းဦးက ပြောကြားခြင်း ဖြစ်သည်။
“AGD ဘဏ်အပြင် ထူးကုမ္ပဏီအုပ်စုအောက်မှာရှိတဲ့ အကျိုးအမြတ် ရရှိနေတဲ့ လုပ်ငန်းတွေအားလုံးကို အများပိုင်အဖြစ် ဒီနှစ်ထဲမှာ တော်တော်များများ ပြောင်းဖို့ရှိပါတယ်။ ဘယ်လိုလုပ်ငန်းတွေ ဆိုတာကိုတော့ လုပ်ငန်းပိုင်း သဘောသဘာဝအရ မပြောနိုင်သေးပါဘူး” ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် အချမ်းသာဆုံးစာရင်းဝင် ဦးတေဇပိုင်ဆိုင်သော ထူးကုမ္ပဏီအုပ်စုအောက်၌ ကျောက်စိမ်းကျောက်မျက်လုပ်ငန်း၊ ခရီးသွား လုပ်ငန်း၊ မိုဘိုင်းဖုန်း လုပ်ငန်း၊ ကျွန်းသစ် လုပ်ငန်း၊ လောင်စာဆီ လုပ်ငန်းတို့ကို လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသည်။
ယင်းသို့ နာမည်ကျော်ကုမ္ပဏီအုပ်စုကြီးတစ်ခုမှ ၎င်းပိုင်လုပ်ငန်းများကို တစ်ဦးတည်းပိုင်မှ အများပိုင်အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပေးခြင်းအပေါ် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိရန် လိုအပ်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံငါးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်မှ ဒုဥက္ကဋ္ဌဦးနှင်းဦးက ပြောသည်။
“ပွင့်လင်းလာတဲ့ ဈေးကွက်စီးပွားရေးမှာ တိုးချဲ့တယ်လို့ပဲ ပြောရမှပေါ။့
ငွေစာရင်းသဘောအရဆိုရင် ငွေခေါ်တဲ့သဘောပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ အများပိုင် ကုမ္ပဏီကို ဘယ်လိုအချိုးအစားနဲ့ လုပ်မလဲဆိုတာ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိဖို့ အရေးကြီးတယ်။ Public Offering လို့ခေါ်တဲ့ ရှယ်ယာဝင်မယ့်သူတွေအပေါ် ထင်သာမြင်သာမှုရှိအောင် လုပ်ဖို့လိုတယ်။ မစ်ဆူဘီရှီတို့လို ကမ္ဘာ့အဆင့်မီ ကုမ္ပဏီကြီးတွေ ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်တော့ ဒီလိုပဲ ရှယ်ယာတွေခေါ်ပြီး အများပိုင်လုပ်ရမှာပဲ” ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
နိုင်ငံတကာ စံနှုန်းအတိုင်း မြန်မာတက္ကသိုလ်များ၏ အရည်အသွေး စစ်ဆေးမည်
Ponnya Swe's photo.
မြန်မာတက္ကသိုလ်များ နိုင်ငံတကာ အဆင့်မီရေး ရေရှည်ပံ့ပိုးမည်ဟု ဥရောပသမဂ္ဂ ပြောကြား နိုင်ငံတကာ စံနှုန်းအတိုင်း မြန်မာတက္ကသိုလ်များ၏ အရည်အသွေး စစ်ဆေးမည်................
မြန်မာ တက္ကသိုလ်များ၏ အရည်အသွေး နိုင်ငံတကာ အဆင့်မီစေရေး အတွက် ရေရှည်ပံ့ပိုး ကူညီမှုများကို ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း၂၀၁၃ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၈ ရက်နေ့နှင့် ၉ ရက်နေ့များက ရန်ကုန်မြို့ Traders Hotel ၌ ဥရောပ သမဂ္ဂနှင့် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနတို့ ပူးပေါင်း၍ Quality of Higher Education ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည့် အဆင့်မြင့်ပညာကဏ္ဍ အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲ၌ ဥရောပသမဂ္ဂက ပြောကြားခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဥရောပသမဂ္ဂ ကိုယ်စားလှယ် H.E Mr.David Lipman က ''မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အဆင့်မြင့်ပညာ ကဏ္ဍမှာ တက္ကသိုလ်တွေရဲ့ အဆင့်အတန်းကို နိုင်ငံတကာ အဆင့်မီဖို့အတွက် ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ဆွေးနွေးမှုတွေ၊ ပံ့ပိုးမှုတွေကို ရေရှည် လုပ်ဆောင်ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်'' ဟု ယင်းအလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲ၌ ပြောကြားခဲ့သည်။
အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲတွင် မြန်မာနိုင်ငံရှိ တက္ကသိုလ်များ သင်ကြားမှု၊ သင်ယူမှု အရည်အသွေး၊ သင်ထောက်ကူ ပစ္စည်းများ၏ အရည်အသွေး၊ တက္ကသိုလ်များ၏ အရည်အသွေးများကို နိုင်ငံတက္ကသိုလ်များအတိုင်း စံချိန်စံညွန်းများနှင့် အညီ အဆင့်မီစေရေးအတွက် ဥရောပသမဂ္ဂ အဖွဲ့အစည်းများမှ နိုင်ငံတကာ တက္ကသိုလ်များ၏ အရည်အသွေး စံနှုန်းများအား ချပြဆွေးနွေးခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ ပညာရေး ၀န်ကြီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ သက်ဆိုင်ရာ တက္ကသိုလ်အလိုက် တာဝန်ရှိသူများကလည်း သိရှိလိုသည်များကို အပြန်အလှန် ဆွေးနွေးမေးမြန်းခဲ့ကြသည်။
မြန်မာနိုင်ငံရှိ တက္ကသိုလ်များအား နိုင်ငံတကာ တက္ကသိုလ်များ၏ စံနှုန်းအတိုင်း အရည်အသွေး စစ်ဆေးမှုများကို တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာအရ တက္ကသိုလ်များ၌ ဆောင်ရွက်သွားလျက်ရှိပြီး နိုင်ငံတကာ စံချိန်စံညွှန်းများနှင့် အညီလည်း ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှလည်း တာဝန်ရှိသူများက အဆိုပါ ဆွေးနွေးပွဲတွင် ထည့်သွင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
''မြန်မာ့ပညာရေးက နိုင်ငံတကာနဲ့ယှဉ်ရင် လက်ရှိမှာက အဆင့်မမီသေးဘူး။ ပညာရေး အဆင့်အတန်း မြင့်မားဖို့အတွက် ဆိုရင်လည်း အရင်ဆုံး ဒေသတွင်း အဆင့်၊ အရှေ့တောင်အာရှ အဆင့်နဲ့ညီအောင် လုပ်ရမယ်။ ပြီးမှ နိုင်ငံတကာ အဆင့်အတန်း မီအောင်ဆိုပြီး အဆင့်ဆင့်လုပ်ရမယ်။
ပြည်တွင်းတက္ကသိုလ်တွေရဲ့ စံနှုန်းတွေနဲ့ နိုင်ငံတကာ တက္ကသိုလ်တွေရဲ့ စံနှုန်းတွေလည်း တူညီဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီအလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲမှာ တက္ကသိုလ်တွေရဲ့ အရည်အသွေး တိုင်းတာတဲ့ စံနှုန်းတွေကို အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ တက္ကသိုလ်တွေရဲ့ speaker တွေကနေ စံနှုန်းတွေကို ရှင်းပြတယ်။
နိုင်ငံတကာမှာ ဆောင်ရွက်နေတဲ့ စံနှုန်းတွေကို အသိပေးတယ်'' ဟု အဆင့်မြင့်ပညာ ဦးစီးဌာန (အောက်မြန်မာပြည်) ဒုတိယညွန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာ ဇော်မြင့်က ပြောကြားခဲ့သည်။ အရည်အသွေး စံချိန်စံညွှန်း တိုင်းတာစစ်ဆေးခြင်းများကို တက္ကသိုလ် တစ်ခုချင်းစီအလိုက် စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းကာ ပထမအဆင့် အနေဖြင့် တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာအရ တက္ကသိုလ်များ၌ တက္ကသိုလ်အချင်းချင်း အပြန်အလှန် စစ်ဆေးလျက်ရှိကြောင်း၊ ထိုမှတစ်ဆင့် နိုင်ငံတကာအဆင့် တက္ကသိုလ် အဖွဲ့အစည်းများအား ဖိတ်ခေါ်စစ်ဆေးမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
''မြန်မာနိုင်ငံက ကျောင်းသားတွေကို Student Exchanged Program အနေနဲ့ နိုင်ငံတကာ တက္ကသိုလ်တချို့က ကမ်းလှမ်းတာရှိတယ်။ ဒီလိုမျိုး ကျောင်းသား ဖလှယ်နိုင်ဖို့အတွက်လည်း ကျွန်တော်တို့ဘက်က အရည်အသွေးနဲ့ နိုင်ငံတကာ ကျောင်းသားတွေရဲ့ အရည်အသွေး အာမခံချက်တူအောင် မြှင့်ပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်'' ဟု ပညာရေး ၀န်ကြီးဌာန ဒုတိယ၀န်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးမြင့်က ပြောသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၌ တက္ကသိုလ်နှင့် ကောလိပ် ၄၇ ခု ရှိကြောင်း သိရသည်။
၂၀၀ တန်ပေးလျင် အကြွေပြန်မအမ်း
Zaw Lwin Win's photo.
Max Myanmar ကုမ္မဏီပိုင် ငွေကောက်သည့် ဂိတ်ကြောင့် သန်လျင် မြို့ ခရီးသွားများ ဒုက္ခရောက်နေ...
မြန်မာနိုင်ငံ တစ်ဝှမ်းလုံးရှိ အဝေးပြေးကားလမ်းများတွင် မြို့ဝင်ကြေး (ဘီးခွန်) ကောက်ခံခြင်း၊ လမ်း/ တံတား အသုံးပြုခွင့် ကောက်ခံခြင်း လုပ်ငန်းများကို အစိုးရ ဌါနများထံမှ လုပ်ပိုင်ခွင့် ပါမစ်ရယူပြီး တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် လုပ်ဆောင်နေသော Max Myanmar ကုမ္မဏီပိုင် ဂိတ်တစ်ဂိတ်ကြောင့် သန်လျင်မြို့ရှိ ခရီးသွားများ အခက်ကြုံနေရကြောင်း သိရသည်။
လွန်ခဲ့သော ၂၀၁၂ ခုနှစ် အကုန်အထိ
ရန်ကုန်- သန်လျှင် မြို့ဝင်ကြေး နှင့် လမ်းတံတား အသုံးပြုခ ဂိတ်ကို ရန်ကုန်မှ သန်လျင် အ၀င်ကောက်ခံရေးအတွက် ရန်ကုန် - သန်လျင် တံတား ထိပ်တွင် စုပေါင်း ကောက်ခံလေ့ရှိပြီး ကျိုက်ခေါက် ဘုရားဖက် မြို့ဝင်ဂိတ်ကိုမူ အောင်ချမ်းသာ ရပ်ကွက် ထိပ်တွင် ကောက်ခံခဲ့သည်။
၂၀၁၃ ခုနှစ် အစ တွင်မူ မြန်မာ့မီးရထားမှ ချထားပေးသော ရန်ကုန် - သန်လျင် တံတား အသုံးပြုခကို ရွှေထမင်းရှင် ကုမ္မဏီက လုပ်ပိုင်ခွင့် ရရှိသွားသောကြောင့် Max Myanmar ကုမ္မဏီ အနေဖြင့် ဂိတ်အရွှေ့ အပြောင်းလုပ်ခဲ့ရာ ရန်ကုန်မှ သန်လျှင် အသွား မြို့ဝင်ကြေး ကောက်ဂိတ်စခန်း နှင့် လမ်းအသုံးပြုခ ကောက်ခံရေး စခန်း ကို ယခင်နေရာတွင် ကောက်ခံသော်လည်း ကျောက်တန်းဘက် မှ သန်လျင် အ၀င် ဂိတ်ကိုမူ အောင်ချမ်းသာ အကျော် တွင် ကောက်ခံလျက်ရှိရာ အသွားအပြန် နှစ်ကြောင်း စလုံး အတွက် ငွေကောက်ခံလျှက် ရှိသောကြောင့် လမ်းကြောင်း ပိတ်ဆို့မှု များ ဖြစ်ပေါ်နေပြီး အဆိုပါ မြို့ဝင်ကြေး နှင့် လမ်းအသုံးပြုခ ပေးဆောင်ရန် တစ်မိုင်နီးပါးခန့် တန်းစီစောင့်ရသည့် အနေအထားအထိ ဖြစ်ပေါ်နေပြီး နေ့လည် နေပူပြင်းသည့် အချိန်မျိုးတွင်မူ ကားပေါ်ရှိ ခရီးသွားများမှာ မူးမော် လဲကျသည်အထိ ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
"လွန်ခဲ့တဲ့ လလောက်ကမှ စဖွင့်တဲ့ အဲ့ဒီဂိတ်ဟာ တောင်ကုန်းထိပ်မှာ ဖွင့်ထားတယ်။ ကားနှစ်စီးဘဲ သွားလို့ရတဲ့ လမ်းတောင်ကုန်းထိပ်မှာ ဟိုဖက် ဒီဖက် ပိတ်ပြီး ငွေကောက်တော့ ကျော်တက်တဲ့ကားက ရှေ့က ကားလာနေလား ဆိုတာလဲ မသိရ ရမ်းကျော်တော့ အသက် အန္တရာယ်တွေလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။ ပိုဆိုးတာက စည်/ပင် နယ်နမိတ် အတွင်းမှာ မြို့ဝင်ကြေးဂိတ်စခန်း လာဖွင့်ထားတော့ ဂိတ်နားနေတဲ့သူတွေ အိမ်ပြန်လဲ ပေးရ အိမ်ကထွက်လဲ ပေးရ နဲ့ အတော် ဒုက္ခရောက်တယ်။ သူတို့ကတော့ များများရတာပေါ့။ ပေးရတာထက် ပေးဖို့ စောင့်ရတဲ့ ဒုက္ခကို ပိုစိတ်ပျက်တယ်။" ဟု အောင်ချမ်းသာ ကုန်းနေ တက္ကစီ ကားသမား ဦးသိန်းလှ က ပြောသည်။
Max Myanmar ကုမ္မဏီင်္ အနေဖြင့် Lite Ace ကားတစ်စီးလျင် ရန်ကုန်- သံလျင် မြို့ဝင်ကြေး ၁၅၀ ကျပ်၊ (၂၀၀ တန်ပေးလျင် အကြွေပြန်မအမ်း)၊ အောင်ချမ်းသာ ဂိတ် (သန်လျင် အထွက်) လမ်းအသုံးပြုခ အတွက် ၂၀၀ ကျပ်၊ ကျိုက်ခေါက် ဘုရားအနီး အောင်ချမ်းသာ ဂိတ်မှ သန်လျင် အ၀င် မြို့ဝင်ကြေး နှင့် လမ်းအသုံးပြုခ အတွက် ၃၀၀ ကျပ် ကောက်ခံလျက် ရှိသည်။
ဓါတ်ပုံ အညွန်း - ကျိုက်ခေါက်ဘုရား ဘက်မှ သန်လျင် သို့ အ၀င်ကားများ မြို့ဝင်ကြေး ပေးဆောင်သွားလာနိုင်ရေး တန်းစီ စောင့်ဆိုင်နေရစဉ်.. (သီလ၀ါ လမ်းဆုံ)
Eleven Media Group ၏ ဇာတ်သိမ်းခန်းရောက်တော့မည် ဟု BHG ပြော
Eleven Media Group ၏ ဇာတ်သိမ်းခန်းရောက်တော့မည် ဟု Blink Hacker Group မှ G Tone Mmhu က အရိပ်အမြွတ် ထုတ်ဖော်ပြောကြား လိုက်ပါတယ်။
BHG မှ G Tone Mmhu နှင့် Rat Crew တို့၏ facebook များတွင် Eleven Media ၏ Email အကောင့်များကို ရရှိထားကြောင်း အထောက်အထားများကိုလည်း ဖော်ပြထားသည်ကို တွေ့ရပြီး BHG စာမျက်နှာတွင် Eleven Media Website အား BHG မှ ဝင်ရောက် ထိုးဖောက် တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းကို ရေးသားဖော်ပြထားသည်။
Eleven Media အနေဖြင့် ၃ ကြိမ်ကြိမ်တိုင်တိုင် Web site Hack ခံရပြီး facebook တစ်ကြိမ် အဖောက်ခံရကာ အီးမေးနှစ်ကြိမ် အဖောက်ခံရထားသည့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမအဆင့်မီဒီယာနေရာအား ရရှိထားကြောင်းနှင့် နောက်ဆုံးရရှိထားသော သတင်းများအရ ဦးသန်းထွဋ်အောင်နှင့် ဝေဖြိုးတို့သည် BHG ကို ကြောက်ရွံ့လွန်း သဖြင့် တစ်နာရီတစ်ခါ Password Change နေကြောင်း သိရသည်။
Myanmar Express Group ၏ ဖော်ပြချက်ဖြစ်ပါတယ်။ General Knowledge
May Popa's photo.
တောင်ပေါ်တောင်ရွာကအဘဦးမြသောင်းရဲ့ခံစားရမှုတွေကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ အဘဦးမြသောင်းရဲ့စကားတွေပါ၊
"အဘရဲ့ယာမြေ ငါးဧက ဆုံးရှုံးခဲ့ပါတယ်၊သီးနှံလျော် ကြေး ၁ဧကကို ၆၀၀၀၀ပဲရပါတယ်၊သီးနှံလျော်ကြေးက အဘမျက်ရည်တစ်စက်လောက်မှတန်ဖိုးမရှိပါဘူး
မြေမသိမ်းမီက ပြောင်းနဲ့နေကြာကိုအဘစိုက်ပါတယ် ပိုတဲ့မြေကို သုံးလမြေပဲစိုက်ပါတယ်၊အားလုံးစိုက်ပြီးမှမြေလာသိမ်းတော့အဘသီးနှံတွေကိုမြေထိုးစက်နဲ့အကော်ခံလိုက်ရတယ်၊အဘရဲ့အိမ်ရှင်မက ရူးမတတ်ငိုလိုက်ရတယ်၊elအဘရင်ထဲကိုစက် နဲ့ထိုးကော်တာထက်နာတယ်၊အဘသိတာကတိုင်းပြည်တိုးတက်အောင်လက်မှုလယ်ယာမှစက်မှုလယ်ယာပြောင်းတာပဲ သီးနှံတွေထိုးကော်လိုက်တာအဘလက်တွေ့ပဲ
ယာကအပြန်အဘကခြေကျိုးလို့စတီးချောင်း ထည့်ပြီး အိပ်ယာထဲလဲနေတုန်းကြားလိုက်ရတဲ့သတင်းကအဘစိတ်ကိုတရားနှလုံးသွင်းမရလောက်အောင်ဖြစ်ရတယ်
အဘတို့ကျ မတရားယာသိမ်းခံရတယ် မကောင်းတဲ့လေလဲရှူရတယ် လျော်ကြေးကျတော့ ၆၀၀၀၀ပဲရတယ် အဘတို့ကျတော့ လူမဟုတ်သလိုပဲနော်
လက်ကျန်မြေ ဒသမ၅ဧကထဲက ဒသမ၄ဧကကို ထပ်ပြီးလမ်းအတွက်သိမ်းခံလိုက်ရတယ် ခြေကျိုးရုံမက စိတ်ပါအချိုးခံရပြီးအိပ်ရာထဲလဲတော့တာပါပဲ
ဒီအဖြစ်အပျက်အားလုံးကို အဘ သက်ရှိထင်ရှားရှိနေသေးသရွေ့ သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေ မည်သူနဲ့မဆိုသက်သေခိုင်လုံစွာရှင်းပြနိုင်ပါတယ်
ဒီကိစ္စတွေကို တရားမျှတစွာမဖြေရှင်းနိုင်သေးသရွေ့ အဘလဲ ဘယ်တော့မှမကျေနပ်နိုင်ပါဘူးကွယ်၊ အဘအတွက်တော့မဂ်တား ဖိုလ်တား လုပ်နေတဲ့ပိုဇိုလန်စက်ရုံ ကြီးပါပဲ"
မေပုပ္ပားက တဆင့် မျှဝေပါသည်
အဘဦးမြသောင်း မသေခင် စိတ်ချမ်းသာစွာ တရားဖြင့် နေသွားနိုင်ပါစေရှင်
ယာမြေတွေကိုဒေသခံတွေဆီက ယာမြေလျော်ကြေးမပေး သီးနှံလျော်ကြေး တစ်နှစ်စာသာပေးပြီး လျှပ်စစ်ဝန်ကြီးဌာနကသိမ်းယူခဲ့တာပါ
အဲဒီလိုသိမ်းထားတဲ့ ယာတွေထဲကမတူးရသေးတဲ့ယာတွေကို ယာယီလုပ်စားရာမှာ သူတို့ကို တောင်သူတွေကတစ်နှစ်ကို ရှစ်ထောင်နှုန်း ပြန်ပေးပြီး ပြန်လုပ်ရပါတယ်
ဒါပေမယ့် ငါးရံ့ကုန်းရွာကတောင်သူအဒေါ်ကြီး ကတော့ ပြန်လုပ်ခွင့်မရပါဘူး။ ဘာကြောင့် မရလဲဆိုတော့ သူ့ရဲ့ ယာက ၁၀နှစ်အတွင်းတစ်ခါပဲဆင်းဖူးတဲ့ ဒီဓာတ်ပုံထဲက ရဟတ်ယာဉ်ကွင်းနဲ့ နီးလို့ပါတဲ့ရှင်
ဒီပဲယင်းနဲ့နာမည်ကျော်တဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ဆိုးဝင်းပဲ ဒီကိုတစ်ခါလာပါတယ်၊ တောင်သူအမျိုးသမီးကြီးကတော့ ယာတွေလည်းဆုံးတဲ့ အပြင် လုပ်ကိုင်စားသောက်ဖို့ မျှော်လင့်ချက်တော့ လုံးဝမရှိပါဘူး၊ ကျမတို့အားလုံးက ဝိုင်းဝန်းပြီးဒီလိုအဖိနှိပ်ခံနေရတဲ့ ပြည်သူတွေရှေ့ကမားမားမတ်မတ်ရပ်ပြီး ဒီလိုစက်ရုံတွေကို ရပ်တန့်သွားအောင် တားဆီးကြပါစို့
ပုပ္ပားတောင်က ပိုဇိုလန်စက်ရုံကို ပုပ္ပားသူ/သားများကလုံးဝ အလိုမရှိပါ
မြွေကို သုံးကြိမ် နမ်းတဲ့အမျိးသမီး
နောက်ခံစကားပြော တဲ့လူပြောတာတော့ King Cobra တောကြီး မြွေဟောက်ပါ။ ရွာတွေမှာ မဂ်လာမဆောင်ခင်
သား ယောက်ျားလေး ရအောင်လို့တောင်စောင့်နတ် ကို နတ်ကတော် က မြွေကို သုံးကြိမ် နမ်းဖို့ သွားပူဇော်တာပါ။
ဒီအမျိးသမီးရဲ့ အမ ၂ ယောက်ဟာလဲ ဒီဂူဝမှာ ပဲ မြွေပေါက်ခံရပြီး သေခဲ့တယ်လို့Narrator ပြောတဲ့အထဲမှာ ပါပါတယ်။
မြွေကို ဂူထဲကနေထွက်လာအောင် ခေါ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ မြန်မာ အမျိုးသ္မီး တဦးရဲ့ Will Power control ကိုသြချလောက်
တရုတ် နိုင်ငံမှ တောင်းပန် စကားပြောကြားရန် ဂျပန် ဝန...
ဦးတိတ်နိုင်သို့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးစိုးသိန်းမှ ...
ထူးကုမ္ပဏီလက်အောက်ရှိ လုပ်ငန်းအားလုံး ယခုနှစ်အတွင်း...
နိုင်ငံတကာ စံနှုန်းအတိုင်း မြန်မာတက္ကသိုလ်များ၏ အရည်...
Eleven Media Group ၏ ဇာတ်သိမ်းခန်းရောက်တော့မည် ဟု ...